HomeWararka CiyaarahaQorshaha Lionel Messi ee ku laabashada Kooxda Barcelona oo laga Warbixiyay
November 22, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka France, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Ciyaaryahankii hore ee Barcelona weeraryahanka Lionel Messi ayaa lagu soo waramayaa inuusan qorsheyneyn inuu ku soo laabto kooxda ka dhisan Catalan mustaqbalka.
Xiddiga reer Argentine ayaa doonayay in 50% laga dhimo mushaharkiisa si uu ugu kordhiyo sii joogistiisa Camp Nou xagaagii hore, laakiin sharciga dhaqaale ee La Liga ayaa ka dhigay mid aan suurtogal u ahayn in uu sii joogo Catalonia.
Messi ayaa tan iyo markii uu si gaabis ah ku bilowday nolosha Paris Saint-Germain , waxaana madaxweynaha Barca Joan Laporta uu u sheegay 34 jirkaan inuu raaco wadadii Xavi iyo Dani Alves ee ku aadan soo laabashada suurtagalka ah.
Si kastaba ha ahaatee, AS ayaa sheeganeysa in Messi uusan wax xiiso ah u qabin ku soo laabashada cajiibka ah ee Camp Nou, ha ahaato ciyaaryahan ahaan ama door maamul.
Messi ayaa ka baxay abaarta goolashada ee xilli ciyaareedka 2021-22 ee Ligue 1 kulankii isbuucaan ay 3-1 kaga badiyeen Nantes.